थाहा नगरपालिकाको दामनमा मुख्य कार्यालय रहेको कुण्डलदेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थाको २१ औँ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कोरोना महामारी फैलिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सीमित सहभागितामा साधारणसभा सम्पन्न गरिएको संस्थाका व्यवस्थापक राजन मिश्रले जानकारी दिए ।
संस्थाका अध्यक्ष शिवकुमार खत्रीको अध्यक्षता तथा थाहा–४ का वडाध्यक्ष दिपकसिं लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा साधारणसभा गरिएको हो । सभाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि लामा, संस्थाका पूर्वअध्यक्ष विनोदकुमार लामा, थाहाटाइम्सका सम्पादक कुमार नेगी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
साधारणसभाले अध्यक्ष शिवकुमार खत्री, सचिब रामकुमार बल र कोषाध्यक्ष सिताराम रुम्बाको प्रतिवेदन सर्वसम्मत् पारित गरेको छ । सभासमक्ष कोषाध्यक्ष रुम्बाले गत आर्थिक बर्षमा रु. ३ करोड ७४ लाखको आर्थिक कारोबार भएको जनाउँदै रु. ८ लाख ९६ हजार खुद नाफा भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।